Xဂုတ် 2017 - RayHaber
လများ: သြဂုတ်လ 2017
ဧဝံဂေလိတရားကိုထံမှ MAG ဘူတာတက္ကစီဘူတာတက္ကစီမောင်းသူ
အဆိုပါ cabbies "ကျနော်တို့ကရပ်တန့်ဖို့လိုခငျြ" တက္ကစီ Stop အနီးတွင်ပြီးခဲ့သည့်တစ်လ 30 တထောင် TL ဒဏ်ငွေဖြတ်ဘူတာကြောင့် '' တားမြစ်ထားရာအရပျခေတ္တနား '' များ၏ရှေ့မှောက်၌ခရီးသည်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် YHT ဘူတာနိုင်ငံတော်သမ္မတ Melih ဝယ်လိုအားအနေဖြင့်တုံ့ပြန်မှုရောက်လာတယ်။ မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖြေရှင်းပေးမယ့်ရဲ့ထုံးစံများတွင် MAG, "။ [ပို ... ]
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Izmir, Izmir Suburban စနစ်İZBAN,7၏အခြေခံဖွဲ့စည်း။ နောက်ကွယ်မှနှစ်ပေါင်း။ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်İZBANနှင့်အတူအဘယ်ကြောင့် 50-50 မိတ်ဖက်ဖြစ်သောİzmirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Izmir ၏မြောက်ဘက်-တောင်ဘက်ဝင်ရိုး၏သြဂုတ်လ 30 2010 သမိုင်းဝင်ခရီး [ပို ... ]
SAMULAŞ Inc ကိုမှ General Manager Kadir Gürkan, မြို့တော်ရဲ့အရေးအပါဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီsamulaş 1 နေ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မဂ္ဂဇင်းသို့ပြောကြားခဲ့သည်။ LRT Gürkan Kadir စစ်ဆင်ရေးစင်တာများနှင့် ပတ်သက်. အရေးပါသောကြေညာချက်တွေ့ဆော့ဖ်ဝဲမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အမျိုးသားရေးအသီးအနှံစီမံခန့်ခွဲကြောင်းမှတ်ချက်ပြု [ပို ... ]
စပိန်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး (ADIF) နှင့် protocol ကိုနှင့်အတူပြည်သူ့လုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနတို့အကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ Almeria အကြားတည်ဆောက်ထားခံရဖို့ 2019 Murcia မြန်နှုန်းရထားစတင်ခဲ့ပြီးနှင့် 2023 အတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ဖွင့်လှစ်သွားရန်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ မြို့သူမြို့သားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလင့်များနှင့်အတူမက်ဒရစ်နှင့်ဘာစီလိုနာအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း၏ပြီးစီးကိုးကား [ပို ... ]
Mersin ရဲ့တာရှုမွို့ခရိုင်, ကစိန့် Colak သံလမ်းအလေးအနက်ထားဒဏ်ရာရရှိဖြတ်သန်းအဖြစ်ရထားဒဏ်ခတ် 62 နှစ်အရွယ်။ သူကလုံခြုံရေးကင်မရာတွင်ထင်ဟပ်လျက်ရှိသည်နားလည်နိုင်သည်။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ရထားဘူတာရုံ Yenice ခရိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များ 62 နှစ်အရွယ် Aziz က Colak, အဆိုအရ [ပို ... ]
Hani Arifiye-Pendik မယ်လို့ရထားအနုပညာ Trips?
သူကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဧပြီလအတွင်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန် 10 8 အချိန်ထံသို့လာလိမ့်မယ်, အသိဥာဏ်အလင်းကိုပြောသည်။ မဟုတ် 8 ရထားသွားလေ၏သောအရာကိုတစ်ဦးရှင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အရေးအပါဆုံးနည်းလမ်းတစ်ချိန်က Izmit အတွက်ခရီးသည်ရထားခဲ့ပါတယ်။ Sakarya အတွက်ခဲHaydarpaşaနှင့်အတူ [ပို ... ]
BCCI, ကမ္ဘာ့ဖလားနှင့်အတူ 1000 ပိတ်စီးပွားရေးကိုယ်စားလှယ်အတူတကွယူဆောင်
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Bursa ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (BCCI), 2017 နှစ်ပေါင်း 8 1000 ၏ပထမဦးဆုံးအတွက်ပြည်ပမှာအစီအစဉ်များအနီးရှိ 30 ကအနီးကပ်အဖွဲ့ဝင်ခေါက်။ BCCI ဥက္ကဋ္ဌအီဗရာဟင် Burkay, Bursa ကုမ္ပဏီများအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူနီးကပ်စွာနိုင်ငံရပ်ခြားပြိုင်ဘက် [ပို ... ]
Malatya Kurban Bayram အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ပထမဆုံးနေ့၏မြူနီစီပယ်အပေါငျးတို့သဘတ်စ်ကားနှင့် TRAMBUS အခမဲ့ဖြစ်အားလုံးလိုင်းများယေဘုယျအားဖြင့် Malatya ပေါ်တွင်တစ်နေ့လျှင်တစ်လျှောက်လုံးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Day ရဲ့ပထမဆုံးနေ့ကပြောပါတယ်, အထူးသဖြင့်သင်္ချိုင်းအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုငါပေးမည်။ [ပို ... ]
2 ကုန်တင်ရထားတာရှုမွို့၌တိုက်မိ! စက်လုပ်သမားပေါ့ပေါ့ဒဏ်ရာရ
ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, 63040 တာရှုမွို့ထံမှ Adana ဖို့ဦးတည်သွားမယ့်ရထားတစ်စီး, Kamberhöyügအဆင့်ကိုကူးအတွက် Adana ကနေကုန်တင်ရထားအမှတ် 43035 အချိန်နှင့်အတူတိုက်မိ။ အဆိုပါတိုက်မှုအနည်းငယ်ဒဏ်ရာရမီရထားကနေခုန်ချတဲ့သူတစ်ဦးကစက်လုပ်သမား။ လူနာတင်ကားများကတာရှုမွို့ပြည်နယ်ဆေးရုံ [ပို ... ]
Konya တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Tahir Akyürek, ပထမဦးဆုံးနှင့်ဒုတိယနေ့ကအခမဲ့၏ဘတ်စ်ကားများနှင့်လမ်းရထားထိုပွဲကိုခံတော်မူလျှင်, တတိယနှင့်စတုတ္ထရက်ပေါင်းရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့စျေး 50 အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။ Konya တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Tahir Akyürek, မနက်စောစော Al-Adha ၏နိုင်ငံသားများ [ပို ... ]
ယင်း၏ affiliates ulaşımparkသိပ်သည်းဆအားဖြင့် operated Kocaeli တဲ့ Metropolitan Kocaeli ၏မြူနီစီပယ်နှင့်အများကြီးကိုလူAkçarayလမ်းရထားလိုင်းကိုချစ်မြတ်နိုးကြုံနေရသည်။ သြဂုတ်လ 1 2017 18 မှစ. တထောင်ကလူရှေ့မနက်စောစော၏Akçaray 20 720 အတွက်တစ်နေ့လျှင်ပို့ဆောင်တထောင်ခရီးသည် [ပို ... ]
မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအရာရှိတစ်ပန်းကန်ဘတ်စ်ကား, ရွှေ့ဖို့အခမဲ့ Antray နိုင်ငံသားများနှင့်အတူလွမ်းဆွတ်ခံရသောပွဲ trams ။ Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, သန့်ရှင်းသောအစဉ်အလာတာဝန်ခံအခမဲ့ဆောင်ရွက်မည်အငြိမ့်ဖြည့်ဆည်းရန်လူကို enable အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားတွေ။ ECP အရာရှိတဦးကစည်ပင်သာယာ-ပြေး, MKL [ပို ... ]
ယနေ့တွင် 31 1892 Alpu-Sariköyလိုင်းသြဂုတ်လရက်စွဲများခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ 31 1932 Beaver-Kahn ရထားလမ်းသြဂုတ်လအတွင်းစစ်ဆင်ရေးထဲသို့သွင်းထားခဲ့ပါတယ်။ Keçiören Metro ရထားသတင်းနှင့်စမ်းသပ်မှု၏သြဂုတ်လ 31 2016 ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ် drive ကို Kecioren မြေအောက်ရထားအကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်သည်အခြား haberlerankar မှအလားတူထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည် [ပို ... ]
အဆိုပါမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားကြိုက်တတ်တဲ့နီးပါးရောင်းထွက်လက်မှတ်နှင့်လေယာဉ်လက်မှတ်နှင့်အတူဘတ်စ်ကားများကမနက်စောစော Al-Adha အားလပ်ရက်အပန်းဖြေစခန်းနှင့်တိုင်းပြည်ရှေ့တော်၌ထိုရေတွက်ရက်သွားချင်တဲ့သူများနိုင်ငံသားတွေ။ အဆိုပါမနက်စောစော Al-Adha အားလပ်ရက်410 နေ့၏အနည်းငယ်ကျန်ရှိနေသောရက်ပေါင်းနေ့ [ပို ... ]
အများပြည်သူ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်Burulaşမှအများပြည်သူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအောင်အရှုံးကနေရရှိလာတဲ့မလုပ်ပဲရောင်ပြန်ဟပ်, SAI ကိုလည်းဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသေးပြီးပြည့်စုံသည်မဟုတ်, အထုံးအဖွဲ့တော်တို့တွင်ထင်ဟပ်လျက်ရှိသည်။ ထိုကိစ္စပေါ်တွင်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့်အယူခံဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ပါလိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်ဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်တွင် [ပို ... ]
Kars ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာ 25 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပြီးစီး
ဝန်ကြီး Ahmet Arslan "ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်, 35 ကိုင်တွယ်ကုန်တင်၏တန်ချိန်သန်း၏တစ်ဦးစွမ်းရည်ရောက်ရှိဖို့တခုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဧရိယာဖန်တီး 10 သန်းစတုရန်း" ဝန်ကြီး Arslan, ခရိုင် Sarikamis Kars အမျိုးမျိုးသောအဆက်အသွယ်များ, Kars Rahmi Dogan, အ AK ပါတီ၏ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြောင့် လာ. , [ပို ... ]
အိန္ဒိယ Thana အတွက်မီးရထားလွဲသွား
Nagpur Duronto Express ကိုရထား၏မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အိန္ဒိယ 's ခြောက်လလှည်းသိမ်း၏မြို့အနီးလွဲချော်ရပ်တန့်။ အဆိုပါကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကမတော်တဆထိခိုက်မှုအတွက်ခရီးသည်များထိခိုက်ဒဏ်ရာရကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်, အခင်းဖြစ်ပွားရာရောက်ရှိခဲ့သည်။ အိန္ဒိယမီးရထား 16 ဗဟိုမီးရထား, Twitter ကိုဖုံးလွှမ်းဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
"လမ်းသွားလမ်းလာ Project မှ" ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အစ္စတန်ဘူလ် Street မှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ပါတယ်အသွားအလာလွမ်းဆွတ်လမ်းရထားလိုင်းကိုပိတ်လိုက်, နိုင်ငံသားများခက်ခဲစာမေးပွဲတွင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားများ Recep Acar ကနေပြုတ်ကျခြေပူးတွဲဓါတ်ရထားလမ်းကြောင်း, "ငါ့ဦးခေါင်းသည်ခုနှစ်, ငါ့စီးရီး၌ငါအမည်းရရှိပါသည်။ အဆိုပါတိုင်းတာမှုများမတိုင်မီတစ်ဦးကတခဏ [ပို ... ]
Saban နိုက်တင်ဂေးလ်: "Light ကရထားလမ်းကြီးစွန်းပင်နှစ်ပေါင်း 10 ပြီးနောက်ယနေ့စတင်ပါဖို့လိုပါတယ်"
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နိုက်တင်ဂေးလ် "Light ကရထားစနစ်စီမံကိန်းကျွန်ုပ်တို့၏မြို့အဘို့အရေးပါတဲ့စီမံကိန်းကိုဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပင်ရှိသော်လည်းယနေ့စတင်လျှင် 10 တစ်နှစ်ကုန်ဆုံး, အသွားအလာ Plan ကိုဖြေလျှော့ဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏မာစတာခဏအကြာအကောင်အထည်ဖော်ရပါမည်" ဟုသူက Trabzon, ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ခရီးသွားဧည့်ပြောပါတယ် [ပို ... ]